« Can 2021 » – Nisy ihany ny olana: vonona hidona amin’i Niger ny Barea, anio | NewsMada
« Can 2021 » – Nisy ihany ny olana: vonona hidona amin’i Niger ny Barea, anio
Par Taratra sur 19/11/2019
Hotanterahina, anio hariva amin’ny 7 ora latsaka 10mn ao Niamey ny lalao hifandonan’ny Barea sy ny ekipam-pirenen’i Niger. Nisy ihany ny olana, saingy efa any an-toerana ny mpilalao malagasy, hiatrika ny fifanintsanana amin’ny “Can 2021”.
Hazakazaka arahin-tosika ny sidina nataon’ny Barea nihazo ny any Niger. Nisy fikatsoana izany tany amin’ny seranam-piaramanidina nolalovana ka niteraka havizanana kely ho an’ny mpilalao. Na izany aza, efa nigadona any an-toerana, omaly ihany, ireo mpilalao 18 mirahalahy miaraka amin’ny mpanazatra, i Nicolas Dupuis. Hotanterahina amin’ny alina izany lalao izany, araka ny valan-dresaka nataon’ny Federasion’ny baolina kitra (FMF), tetsy Isoraka, omaly.
Ankoatra izany, momba ny lalao nihaonana tamin’i Etiopia, ny asabotsy teo tetsy Mahamasina, nambaran’ny federasiona fa nahazoana tombony 92 tapitrisa Ar izany. Nankasitrahana ny filoham-pirenena sy ny governemanta ary ireo mpiara-miombona antoka.
Etsy an-daniny, ho avy hitsidika eto amintsika kosa ny filohan’ny federasion’ny baolina kitra iraisam-pirenena (Fifa), i Giantini Infantino, ny 24 novambra izao. “Hisy fihaonany amin’ny mpitondra fanjakana sy ny eto amin’ny foiben’ny FMF Isoraka. Eo koa ny fijerena ny sekolin’ny kitra Md Misely sy ny foibe fanofanana eny Carion”, hoy ny filohan’ny FMF, Rabekoto Raoul. Hitohy any Mahajanga izany fitsidihana izany amin’ny alalan’ny fivoriana iarahana amin’ireo vaomiera mpikambana, miaraka min’ny filoha lefitra i Ahmad. Hiverina any Zurich, foiben’ny Fifa ny filoha Giantini Infantino, aorian’izany.
Mandra-piandry izany, hitodika any Niger indray aloha ny mpitia kitra sy ny Malagasy, anio alina amin’ny lalaon’ny Barea.